Madaxweyne Gaas oo Kulamo la Qaadanaya Maamulka Gobolka Mudug iyo kan degmada Gaalkacyo – Radio Daljir
Agoosto 13, 2015 2:28 b 0
Khamiis, Ogoosto 13, 2015 (Daljir) — Madaxweynaha Dawladda Puntland Dr.Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa shalay oo ay taariikhdu ahayd 12-8-2015 siweyn loogu soo dhaweeyey Deegaanada Bacaadweyn,Margeeg, Daarasalaam, Cagaaran iyo magaalo madaxda Gobolka Mudug ee Gaalkacyo.
Soo dhaweynta Madaxweynaha oo siweyn loo diyaariyey ayaaa waxaa ka qeyb-qaatay Wasiiro, Xildhibaano, maamulka Gobolka Mudug,Waxgarad, Haween, Dhalinyaro, Arday iyo masuuliyiin kale duwan, kuwaas oo si hambsami leh uga qeyb qaatay soo dhaweynta Madaxweynaha.
Shacabka oo safnaa wadooyinka hareeraheeda ayaa watay Calamada Puntland, Soomaaliya,caleemo iyo sawiro uu leyahay Madaxweynuhu , waxaana ay ku dhawaaqayeen Mudane Madaxweyne soo dhawoow iyo hal ku dhigyo kale.
Madaxweynaha ayaa deegaanka Cagaaran xariga kaga soo jaray Goob waxbarasho oo cusub , waxaana uu dadka deegaankaas ku booriyey inay ka qeyb ka noqdaan horumarka dalka ka soconaya , dhankoodana looga baahanyahay wax wada qabsi si horumar loo gaaro.
Madaxweynaha Dawladda Puntland Dr.Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa markii uu gudaha u soo galay Magaalada Gaalkacyo hoygiisa kula hadlay warbaahinta qeybheeda kala duwan, isagoona sheegay in safarkaan shaqo uu ku yimi Gobolka Mudug, indha indhaynnayaa mashaariicda Dawladda ee ka soconaya Gobolka.
‘’ Muddo waan joogayaa Gobolka maadama aan wakhti badan ka maqnaa , dabcan maamulka Gobolka, ururada bulshada waan is arkaynaa in sha,allah ‘’ Ayuu yiri Madaxweyne Gaas.
Madaxda iyo shacabkii ka qeyb-qaadatay soo dhaweyntiisa ayaa madaxweynuhu u mahadceliyey , waxaana uu ku amaanay sida hagar la’aaneed ee ay uga qeyb-qaateen horumarka ay gaartay Gobolka Mudug.